Nagarik News - अधम व्यक्तिहरूले पोल खोल्छन्
यदि कुनै मानिस मोक्षको चाहना गर्छ भने उसले आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रिय र विषयवासनालाई विषजस्तो सम्झेर त्याग्नुपर्छ। आफूलाई मन पर्ने राम्रा–नराम्रा कुराहरू सबै निकाली फ्याँकिदिनुपर्छ। अनि, क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता र सत्यतालाई अँगाल्दै सत्यको बाटो खोजेर आत्मालाई पवित्र पार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र मोक्ष पाइन्छ।
अधम व्यक्तिहरू मात्र पारस्परिक पोल खोल्दछन्। ती सबै धमिराको गोलोमा परेको सर्पजस्तै गरी नष्ट हुन्छन्।
ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा सुनमा सुगन्ध, उखुमा फल, श्रीखण्डमा फूल लगाएनन्, विद्वान पनि कहिल्यै धनी हुँदैनन्। राजा दीर्घजीवी हुँदैनन्। सृष्टिका समयमा ब्रह्मालाई यस्तो नगर्नोस् भनी बुद्धि दिने कोही नभएको प्रतीत हुन्छ।
औषधिमध्ये अमृत, सम्पूर्ण सुखमध्ये भोजन, सबै इन्द्रियमा आँखा सबै अंगमा शिर नै महत्वपूर्ण हुन्छन्। औषधिमा अमृतबराबर अरू हुँदैन। सुपाच्य भोज गर्नु नै ठूलो सुख हो। हात, कान, नाक, घाँटी, मुख आदि इन्द्रियमध्ये आँखा नै महŒवपूर्ण छ। शरीरका सबै अंगभन्दा उत्कृष्ट अंग शिर नै हो।
सन्देशवाहक दूत आकाशमा जाँदैन। त्यसैले त्यहाँ कुराकानी पनि चल्न सक्दैन। न त्यहाँ कसैको संगठन मेलमिलाप छ। तैपनि आकाशमा रहने चन्द्रमा र सूर्यमा लाग्ने ग्रहणबारे जुन ज्योतिष जान्ने ब्राह्मणले अग्रिम थाहा पाएका छन्। के तिनीहरू विद्वान होइनन्?
विद्वानहरू गणित विद्याद्वारा चन्द्रमा र सूर्यमा लाग्ने ग्रहणबारे अग्रिम रूपमा नै स्पष्ट बताउँछन्। आकाशमा न त कुनै मानिस पठाउन सकिन्छ न त त्यहाँ कुनैसँग कुरा गर्न सकिन्छ। न कुनै व्यक्तिले सूर्य–चन्द्रसँग भेट्न नै सकेको छ। न त कसैले भनेको छ ग्रहण लाग्ने दिनबारे। तथापि गणितज्ञले ग्रहण लाग्नेबारे स्पष्ट भनिसकेका हुन्छन् भने त्यस्ता विद्वानलाई सम्मान नगरे कस्तालाई गर्ने? कसलाई विद्वान भन्ने?
फिल्म छोड्ने गल्ती
बलिउडमा अभिनेता वा अभिनेत्रीले फिल्म छोड्नु नौलो कुरा होइन। तर, कहिलेकाहीँ उनीहरूले यस्ता फिल्म छोड्ने गल्ती गर्छन्, जसले अरूलाई 'जिरोबाट हिरो' बन्ने अवसर जुराइदिन्छ। फिल्म छोड्नेमा अग्रपंक्तिमा छिन्, करिना कपुर...
नेपालीहरूको ठूलो चाड दसैँ आयो। गरिबगुरुवादेखि सम्भ्रान्तसम्मले दसैँलाई खानपिन, मनोरञ्जन र भेटघाटले रमाइलो बनाउने गरेका छन्। खर्च गच्छेअनुसार गरिएलान्। हरेक सालझैँ यसपालिको दसैँ पनि महँगो भएको छ। रेमिट्यान्सका कारण दूरदराजका...
नेपाली व्याकरणको छेवार गर्ने नेवार गुरुहरू!
दार्जलिङमा गंगा प्रसाद प्रधानको सम्पादकत्वमा स्थानीय बोलीचालीको भाषालाई आधार बनाएर 'गोर्खे खबर कागत्' इ.सं १९०१ मा प्रकाशित भएको थियो। कथ्य भाषालाई नै लेख्य भाषा बनाउने उनको प्रयासप्रति अर्का प्रधान पारसमणिले...
मंसिर अर्थात् प्रश्नमय याम
यसपटक पनि यत्तिकै गयो मंसिर।उत्तर नदिई गयो।उत्तर नदिई भन्नाले, अविवाहितले अनेक प्रश्न झेल्नुपर्छ यो महिना।–यो जाडोमा त दुई हुने होला नि? साथीभाइ ठट्टा गर्छन्।–यो मंसिर त मनाउनुपर्ने! आमाबाको घुमाउरो प्रस्ताव...
ढाका जानुअघि बाङ्लादेशबारे मैले पढे–सुनेको सामान्य ज्ञान चार–पाँच बुँदामा थियो।बाङ्लादेशलाई भाषा, कला, संगीत, नाटक र नृत्यको देश भनिन्छ। संसारमा यो मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ मातृभाषा नै देश निर्माणको मुख्य...
राजधानी त्रासको जंगल भएको छ। किनभने, यहाँ चरी, बाघे र स्यालजस्ता गुन्डा–जीवहरू छन्। नागरिकका सुरक्षा, जिउधन र अमनचैन कुनै पनि बेला उनीहरूको शिकारमा पर्नसक्छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले गुन्डा पालिरहेका छन्,...
'कलाकारले घमण्ड गर्ने आधार के ?'
रंगमञ्च हुँदै फिल्ममा आइपुगेका हुन्, सुवास थापा। 'अग्निको कथा', 'कोर्ट मार्सल'जस्ता नाटकमा उम्दा अभिनय गरेका सुवासले 'कोही मेरो', 'भिजिलान्ते', 'फेसबुक', 'बिर्खेलाई चिन्छस् ?' जस्ता फिल्ममा पनि तारिफयोग्य काम गरेका छन्।...